Wednesday November 13, 2019 - 08:33:41 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in Ciidamada Mareykanka oo kaashanaya Saaxiibadooda Soomaaliya shalay oo Taariikhdu ku beegneyd 12/11/2019 ay duqeyn dhinaca cirka ah ka fuliyeen degmada Jilib oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe isla markaana ay la beegsadeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Qoraalka Africom ayaa waxaa lagu sheegay in duqeynta ay ka dhacday degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe, isla markaana lagu dilay xubin ka tirsan Al-shabaab oo halkaas ku sugnaa.
Sidoo kale Mareykanka ayaa waxaa uu tilmaamay in duqeynta wax Khasaaro ah aysan ka soo gaarin dad rayid ah, kadib markii ay baaritaano sameeyeen.
Warka qoraal ah ee ka soo baxay Taliska Mareykanka ee qaarada Afrika ee loo yaqaano Africom ayaa waxaa lagu sheegay in ruuxa duqeynta lagu dilay ee ka tirsanaa Al-shabaab uu xiriir la lahaa ururka Al Qaacidda.
Dhinaca kale ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka Al-shabaab oo ku aadan in duqeyn ka dhacay degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe looga dilay xubin ka tirsaneyd.